एमसीसीको वि’रोधमा माओवादी निकट अखिल क्रा’न्तिकारीले निकाल्यो म’साल जु’लुस ! – Nepal Online Khabar
एमसीसीको वि’रोधमा माओवादी निकट अखिल क्रा’न्तिकारीले निकाल्यो म’साल जु’लुस !
फागुण १२, २०७८ बिहिबार 147
काठमाडौं : एमसीसीको वि’रोधमा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रा’न्तिकारीले काठमाडौंमा म’साल जुलु’स निकालेका छन् । एमसीसी राष्ट्रघाती भएको र यसलाई सदनबाट पारित गर्न लागिएको भन्दै
उनीहरुले काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा म’साल जु’लुस निकालेका हुन् ।
‘एमसीसी मु’र्दावाद’को नारा लगाउदै उनीहरुले म’साल जु’लुस निकालेका थिए । माओवादीले यथास्थितिमा एमसीसी पा’रित हुन नसक्ने बताउदै आएको छ ।
लिड्सको पोष्टमा लिभरपुलको ६ गोल —:
लिभरपुलले प्रिमियर लिगअन्तर्गत बुधबार राति भएको खेलमा लिड्स युनाइटेडलाई ६-० को फराकिलो अन्तरले प’राजित गरेको छ । घरेलु मैदानमा शानदार जितपछि लिभरपुलले शीर्ष स्थानमा रहेको म्यानचेस्टर सिटीसँगको अंकदूरी ३ मा झारेको छ ।
२६ खेलबाट सिटीको ६३ अंक छ भने लिभरपुलले समान खेलबाट ६० अंक जोडिसकेको छ । लगातार जितपछि लिभरपुल उपाधि होडमा अघि आएको छ । गोल अन्तरमा भने लिभरपुललाई फाइदा छ । यी दुई टोली आगामी अप्रिल १० मा सिटीको मैदानमा भिड्नेछन् ।
एनफिल्डमा भएको खेलमा लिभरपुलका लागि मोहमद सालाहले १५औं र ३५औं मिनेटमा पेनाल्टीबाट गोल गरे । यस्तै ८०औं र ९०औं मिनेटमा गोल गरे भने जोएल माटिपले ३०औं र भर्जिल भान डाइकले इन्जुरी टाइममा गोल गरे । लिगकै अन्य खेलमा बर्नलीले टोटनहमलाई १-० ले हरायो छ । यस्तै क्रिस्टल प्यालेस वाटफोर्डलाई ४-१ ले प’राजित गर्‍यो ।
Prevयस्तो छ पल शाहवि’रुद्धको जाहेरीमा उल्लेख भएको घ’टनाक्रम !
Nextप्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डबीच भेटवार्ता, एमसीसीमा सहयाेग गर्न देउवाकाे आग्रह !
फेरि पेट्रोलमा मात्र १६ रुपैया बढेर आयो पेट्रोलियम प’दार्थको मूल्य !